एकैदिन ३२३ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ३२३५ पुग्यो ! - Sagarmatha Online News Portal
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ सय २३ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या ३ हजार २ सय ३५ जना पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कैलाली र डोल्पामा गरी २ जनाको कारोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि १३ पुगेको छ ।
काठमाडौंमा ४ संक्रमित भेटिए
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंका ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरू ३१ र ३५ वर्षीया महिला र ३६ र ४६ वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
यस्तै, भक्तपुर कमल विनायककी ३१ वर्षीया महिलामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा १७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्याङ्जामा १०, कास्की र नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व ३-३ जना तथा बागलुङमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
प्रदेश ५ मा कति थपिए ?
कपिलवस्तुमा ५० जना संक्रमित थपिएका छन् । उनीहरूमध्ये ३९ जना महाराजगञ्ज नगरपालिकाका छन् । संक्रमित हुनेमा ६ महिनाकी बालिका र ४ वर्षका बालक पनि छन् ।
यस्तै, विजयनगरको क्वारेन्टिनमा रहेका ११ जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
बर्दियाका २८ जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ । राजापुर, मधुवन, गुलरिया, बदैयाताललगायतका स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा रहेका संक्रमितमध्ये एक २५ वर्षीया महिला छन् भने अरू १५ देखि ६० वर्षका पुरुष छन् ।
यस्तै, बाँकेका १२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालगञ्ज, वैजनाथ र खजुराका उनीहरूमध्ये दुई जना २३ र ४१ वर्षका महिला र अरू सबै पुरुष हुन् ।
नवलपरासीका २ जना, रुपन्देहीमा ३ जना र अर्घाखाँचीमा १ जनाको रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको छ ।
कर्णालीका थप ९९ जनामा संक्रमण पुष्टि
कर्णाली प्रदेशमा थप ९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरूमध्ये ४७ जना दैलेखका छन् । महाबु गाउँपालिकाका ४३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । संक्रमित हुनेमा ५ र १८ महिनाका शिशु समेत छन् । यस्तै ४ जना दुल्लुका हुन् ।
सल्यानको बनगाढ कुपिण्डेका ३८ जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेमध्ये २१ वर्षकी २ महिला छन् भने अरू सबै पुरुष हुन् ।
यस्तै, सुर्खेतका नौ जना, जाजरकोटका ४ जना र डोल्पाका १ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा १३ संक्रमित थपिएका छन् । उनीहरूमध्ये ६ जना बझाङको खप्तडाछान्ना गाउँपालिका-३ को क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू छन् । यस्तै, कञ्चनपुर महाकालीका ३८ वर्षीय पुरुष, काठमाडौं घर भई कञ्चनपुरमा रहेका १८ र ३८ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै, कैलालीको धनगढी र गोदावरी ४१ र ५५ वर्षीय पुरुष, अछाम मंगलसेनको क्वारेन्टिनमा रहेकी ५२ वर्षीया महिला र डडेलधुराको नवदूर्गा क्वारेन्टिनमा रहेका २१ वर्षीया महिलामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
महोत्तरीमा ३५ थपिए
महोत्तरीका थप ३५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । गौलाशा, जलेश्वरलगायतका स्थानीय तहको क्वारेन्टिन रहेका उनीहरूमध्ये एक २२ वर्षीया महिला हुन् भने अरू सबै पुरुष हुन् । यस्तै, सर्लाहीमा २७ जना संक्रमित थपिएका छन् । रामनगर र ईश्वरपुरका उनीहरू १६ देखि ३८ वर्षका उमेरका पुरुष हुन् ।
धनुषाको देउपुरा क्वारेन्टिनमा रहेका आठ जना र रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका छ जनामा पनि कारोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सप्तरीका ८ जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरूमध्ये ७ जना बालन बिहुलका हुन् । संक्रमित हुनेमा २ वर्षका एक बालक र बालिका समेत छन् । अर्का सक्रमित बोदे बसाइनका ५० वर्षीय पुरुष हुन् ।
सुनसरीमा ५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेमा भोक्राहका २४ र ३५ वर्षका पुरुष तथा ३८ र ४५ वर्षकी महिला छन् । अर्का धरानका ३० वर्षीय पुरुष हुन् । यस्तै, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकाका १८ र २३ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ३२ सय ३५ पुगेको छ । उनीहरूमध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६५ जना कोरोनामुक्त भएका छन् ।
Published On: Saturday, June 6, 2020